Global Voices teny Malagasy » Jery todika amin’ireo notantarainay momba an’i Amerika Latina tamin’ny taona 2015 · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Novambra 2019 3:24 GMT 1	 · Mpanoratra Mary Aviles Nandika (en) i Gabriela García Calderón, Naomy
Sokajy: Amerika Latina, Mediam-bahoaka, Vaovao Mafana
Hatombotsika amin'ireo mpianatra avy any Ayotzinapa, Meksika, herintaona taorian'ny fanjavonan'izy ireo tamin'ny 26 septambra 2014. Nizara fandinihana  vitsivitsy momba ity loza ity ny namantsika Elizabeth  mba tsy hisian'ny manjavozavo sy ny tsimatimanota amin'ity indray mitoraka ity. Mbola tsy hita ireo mpianatra – mbola tsy mifarana ny raharaha.
Nilaza tamintsika i Elaine Díaz  fa 54 taona taoriana, nihofahofa tao amin'ny masoivohon'ny firenen'izy ireo tsirairay avy indray ny sainam-pirenen'i Etazonia sy Kioba . Ny 14 aogositra, nitarika ny hetsika tany Havana ny sekreteram-panjakana amerikana John Kerry
Manome vaovao farany ho antsika hatrany i Renata Avila  mikasika ny “lohataona” ao Goatemala, raha nidina an-dalambe tamim-pilaminana ireo olom-pirenena an-jatony mba hitaky (ary koa mba hahatratra mihitsy aza)  ny fialan'ny filoha Otto Pérez Molina. Nitranga izany rehefa avy nipoitra ny vaovao momba ny firongatry ny kolikoly bevava tao amin'ny fiadidian'ny filoha izay antsoina hoe “La Linea ,” raha notapahin'ireo tompon'andraikitra ambony ny fifampiraharahana amin'ireo mpanafatra entana mba hialana amin'ny adidy fandoavana haba. Nitarika ny fionganan'ny filoha lefitra Roxana Baldetti izany tantara ratsy izany.
Nanatevin-daharana haingana ny fitakiana fialan'ny filoha Otto Pérez Molina  ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo, ny olom-pirenena, ny fianakaviana, ny vondrona vazimba teratany, ny mpanakanto, ny tanàna, ny tanàn-dehibe, ny hopitaly sy ny maro hafa.
Nahatonga ny #YoNoTengoPresidente  (“tsy mankatoa ny filoha aho”) ny tenirohy malaza #RenunciaYA  (#Mialaizao).
Voafidy ho filohan'i Goatemala vaovao avy eo i Jimmy Morales , mpanao hatsikana teo aloha tamin'ny fahitalavitra,
Nodimandry tamin'ny 13 aprily 2015, teo amin'ny faha-74 taonany i Eduardo Galeano, mpanoratra ny “Ny lalandrà misokatr'i Amerika Latina” sy ny «Tsiaron'Afo», Andrea Arzaba  nampahatsiahy antsika ny lova navelany.
Namakafaka ny fifamindram-pahefana filoha tsy mahazatra  tao Arzantina, izahay ary, izay voarahona na dia ny kaonty Twitter-n'ny lapam-panjakana aza noho ny fahasamihafana nisy tamin'ny filoha teo aloha Cristina Fernández de Kirchner sy ny filoha vaovao Mauricio Macri, ary nosoritsoritanay i Tamara Adrián , transgenre voalohany voafidy ho depuote tany Venezoelà.
Momba ny lohahevitra fahalalaham-pitenenana, nanaraka akaiky ny zava-misy tany Ekoadaoro izahay, avy amin'ny tantara momba an'i Crudo Ecuador , ilay tranga fampahalalam-baovao sosialy mihidy ankehitriny izay namoaka sary mahatsikaiky fa tsy nahafaly ny filoha Rafael Correa, nitatitra ny fomba nanaovana an-tranomaizina olom-pirenena roa. Ny iray noho ny fitehafana tamin'ny fihetsiketsehana iray  ary iray hafa noho ny fanamelohana ny lazaina fa kiantranoantrano ao anaty governemanta .
Tany Venezoela, nohazavainay fa sioka iray na roa fotsiny  ho an'olona fito mbola madio dosiem-pitsarana na fahavitrihana fironana ara-politika dia migadra noho ny firesahana tao amin'ny Twitter.
Nampitainay ny fivoaran'ny fanambadiana mitovy [lanja] tany Meksika  sy Shily . Nasongadinay ihany koa ny ezaky ny tovolahy Meksikana iray miady amin'ny fankahalàna transgenre , video iray isaky ny mamoaka.
Ny taona 2015 dia taonan'ny Copa América, fifaninanana baolina kitra lehibe indrindra an'ny kaontinanta, fa notantarain'i Gabriela García Calderón  ny andiany voalohany indrindra amin'ny amboara iray – ny Copa América an'ny vondrompiarahamonina vazimba. Tamin'ireo feo manohana sy manohitra, nanomboka tamin'ny 16 Jolay 2015 tany Arica any avaratr'i Shily ity fiadiana amboara iray hafa ity ; andrenesana ny hiaka afafán fampiasan'ny Mapuche an'ady na ho fankalazana.
Ao amin'ny tambajotra sosialy, ireo setriny mampitokelaka  avy amin'ny Meksikana amin'ireo fandrahonana ataon'ny vondrona mitam-piadiana ISIS sy ny tantaran'ny vondrom-piarahamonina miozolomana tsimanampaharoa  [mg] ao Colombia anisan'ny be mpijery indrindra.
Laura Vidal  nitondra antsika nitondra tantara'ny bilaogera YouTube Ekoadaoreana iray manazava  amin'ny mpijery azy ny tombontsoan'izany hoe Latino izany rehefa ampitan-dranomasina.
Patricia Carolina Saucedo Añez  nivantana tamin'ny lohahevitry ny tsiaro iray manantantara  ao anatin'ny vanim-potoanan'ny Web 2.0. Ary i Yessika Gonzalez  nitondra antsika hanavatsava ireo singa mifaningotsingotra ara-tsosialy toekarena ary kolontsaina  hita amin'ny fombam-pandevenana jiolahy ao Venezoelà.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/11/25/145032/
 Nilaza tamintsika i Elaine Díaz: https://es.globalvoices.org/author/elaine-diaz/
 Renata Avila: https://es.globalvoices.org/author/renata-avila/
 hitaky (ary koa mba hahatratra mihitsy aza): https://globalvoicesonline.org/2015/08/29/a-week-before-a-huge-vote-demonstrators-fill-guatemalas-streets-calling-for-president-to-step-down/
 La Linea: http://www.cicig.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=587&cntnt01returnid=67
 Otto Pérez Molina: https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_P%C3%A9rez_Molina
 Jimmy Morales: https://globalvoices.org/2015/12/04/jimmy-morales-the-new-face-of-guatemalas-military-old-guard/
 fifamindram-pahefana filoha tsy mahazatra: https://globalvoices.org/2015/12/30/cristina-fernandez-de-kirchners-absence-and-other-curiosities-surrounding-argentinas-presidential-inauguration/
 Tamara Adrián: https://globalvoices.org/2015/12/04/a-transgender-candidate-defies-social-conventions-in-venezuela/
 Crudo Ecuador: https://globalvoices.org/2015/02/17/ecuadorian-president-threatens-internet-satirists/
 noho ny fitehafana tamin'ny fihetsiketsehana iray: https://globalvoices.org/2015/11/16/ecuadorean-man-faces-18-months-in-jail-for-clapping-at-a-protest/
 kiantranoantrano ao anaty governemanta: https://globalvoices.org/2015/12/09/ecuadorean-political-leader-who-criticized-government-nepotism-on-twitter-gets-15-days-in-prison/
 sioka iray na roa fotsiny: https://globalvoices.org/2015/11/09/in-venezuela-140-characters-can-land-you-in-jail/
 fankahalàna transgenre: https://globalvoices.org/2015/10/09/meet-the-young-mexican-whos-taking-on-transphobia-one-video-at-a-time/
 ity fiadiana amboara iray hafa ity: https://globalvoices.org/2015/07/22/latin-american-indigenous-communities-compete-in-the-other-copa-america/
 setriny mampitokelaka: https://globalvoices.org/2015/11/27/the-big-laughs-of-mexicos-isis-threat/
 tantaran'ny vondrom-piarahamonina miozolomana tsimanampaharoa: https://mg.globalvoices.org/2015/11/05/76285/
 Patricia Carolina Saucedo Añez: https://globalvoices.org/author/carolina-saucedo/
 lohahevitry ny tsiaro iray manantantara: https://globalvoicesonline.org/2015/08/20/argentinians-keep-the-memory-of-dictatorship-victims-alive-on-the-web/
 ireo singa mifaningotsingotra ara-tsosialy toekarena ary kolontsaina: https://globalvoices.org/2015/10/27/the-violent-life-and-afterlife-of-venezuelas-slums/